समाचार Archives - Page 296 of 300 - कृषि पत्रिका
किसानलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै पेन्सनको व्यवस्था
बुधबार ०८ भदौ, २०७३
धनगढी। कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य शुरु गरिसकेको बताएका छन् । धनगढीमा आज आयोजित पत्रकार घेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य शुरु गरिसकेको बताएका हुन् । मन्त्री चौधरीले पेन्सनको वितरणबारे ड्राफ्ट तयारी भईरहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै पेन्सन लागु गरिने बताए । एक लाखदेखि पाँच लाख उत्पादन […]
हुने खानेलाई मात्र ‘प्याक्ट ‘ को अनुदान !
काठमाडौं। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट वितरण हुने अनुदानको करोडौं रकम चरम दुरुपयोग भएको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा २०६६ देखि सञ्चालन भइरहेको प्याक्ट आयोजना कृषि क्षेत्रमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । रकम दुरुपयोगका लागि नयाँ परियोजना खडा गरी प्याक्टकै उच्च अधिकारीको मिलोमतोमा अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । त्यस्ता […]
म्याग्दीमा चट्याङ लागेर ७२ भेंडा मरे
बिहिबार ०२ भदौ, २०७३
म्याग्दी। म्याग्दीको गुर्जामा चट्याङ लागेर ७२ भेंडा मरेका र दुई कृषक घाइते भएका छन्। स्थानीय पुरान बुकीमा रहेको गोठमा बुधबार राति चट्याङ पर्दा सात कृषकको ७२ वटा भेंडा मरेका र गोठमा रहेका इन्द्रबहादुर छन्त्याल र नरे विक सामान्य घाइते भएका गुर्जा गाविसका सामाजिक परिचालक झकबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए। बिहानमात्र होस खुलेका उनीहरुको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा […]
बुधबार ०१ भदौ, २०७३
लमजुङ । बाँझाखेत गाविस खाँचेका सोमबहादुर तामाङ करिब पाँच वर्ष विदेशमा बस्नुभयो । पहिलो पटक छुट्टीमा आएका सोमबहादुरले खासै कमाउन सकेनन् । ऋण गरेर दोस्रोपटक उहाँ विदेश जानुभयो । दोस्रो पटक पनि उहाँ विदेशबाट रित्तो हात घर फर्किनुभयो । त्यसपछि उहाँ गाउँमै अलैँची खेती गर्नथाल्नुभयो । गाउँमा अलँैची खेतीमा लागेपछि उहाँले दुई पटकसम्म विदेश जाँदा […]
बिना माटो काँक्रो उत्पादन
आइतबार ३० साउन, २०७३
बनेपा। तपाई पत्याउनुहुन्छ ? कुनै कृषि उपजको उत्पादन माटो बिना पनि हुन्छ भनेर । तर काभ्रेपलाञ्चोकमा एकजना कृषकले जिल्लामै पहिलो पटक माटो बिना नै काँक्रो उत्पादन गरेका छन् । जिल्लाको उग्रचण्डीनाला गाविस– १ मा नेपाल इन्ट्रिग्रेटेड मोडेल एग्रो फार्म प्रालिले उत्पादन गरेको काँक्रो झट्ट हेर्दा घिराँैला जस्तो देखिए पनि स्वादमासमेत फरक पाउन सकिन्छ । माटोमा […]
नयाँ जातको च्याउ खेती सुरु
बुटवल। तराईको गर्मी मौसममा पनि उत्पादन राम्रो हुने भएपछि रुपन्देहीमा सेतो मिल्की च्याउको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको छ । जाडो सिजनमा मात्र कन्ये च्याउको खेती गरिँदै आएको तराई भेगमा च्याउको माग बढेसँगै त्यसको विकल्पमा सेतो मिल्की च्याउको परिक्षण पछि सुरुवात गरिएको हो । सामान्यतया ३७ देखि ४२ डिग्री तापक्रममा पनि सेतो च्याउबाट राम्रो उत्पादन लिन […]
टिमुर खेति कसरि गर्ने ?
शुक्रबार २८ साउन, २०७३
टिमुर २–३ मिटर अग्लो, काँडेदार, सुगन्धित, सानो खालको रुख वा झाडी वर्गको, पतझड वनस्पति हो । संयुक्त पात एकान्तर, ४–८, से.मी. लामो, स–साना ३–१३ वटा पत्रकहरू भएको हुन्छ । पत्रकहरूविपरीत, भेट्नु नभएको, अण्डाकार, किनारा महिसो करौती जस्तो वा सीधा, टुप्पा तिखो, माथिल्लो सतह गाढा हरियो र तल्लो सतह फिका हरियो रङ्गको र ग्रन्थियुक्त हुन्छ । […]
दूध बेचेर मासिक नौ लाख
शनिबार २२ साउन, २०७३
पोखरा। मेहनत गरे आफनै देशमा मनग्य कमाउन सकिने रहेछ भन्ने उदाहरणीय कृषक बनेका बनेका कास्कीको लाहाचोक गाविसका इमानबहादुर गुरुङ । तीन वर्षअघिदेखि भैँसी र गाईपालन व्यवसाय सुरु गरेका गुरुङको दूध बिक्रीबाट मासिक रु नौ लाख आम्दानी हुन्छ । अहिले गुरुङको गोठमा ३०० वटा उन्नतजातका भैंसी र १२ वटा गाई छन् । “दैनिक ८०० लिटरदेखि ९०० लिटरसम्म दूध उत्पादन […]
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिसदमा तालावन्दी
शुक्रबार २१ साउन, २०७३
ललितपुर। माओवादी केन्द्र निकट मजदुर संगठन अखिल नेपाल संघ संस्था तथा बैँक वित्तिय श्रमिक संघ कृषि मुल इकाई समितिले सात बुँदे माग राखि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिसदमा तालावन्दी गरेका छन् । अहिले पाउँदै आएको रु. ३५० ज्याला जिल्लाको परिवर्तित ज्याला रु. ४८० अनुशार पाउनुपर्ने र कृषि मजदुरलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धरा स्थायी गराउनुपर्ने लगाएतका मागहरु रहेको आन्दोलनमा संलग्न […]
देशभर नब्बे प्रतिशत रोपाइँ
काठमाडौँ। देशभर ९० प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । कृषि विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जिसीका अनुसार उच्च पहाडमा ९२.१९, मध्यपहाडमा ९२.७० र तराईमा ८८.७६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । पश्चिमको तुलनामा पूर्वमा कम रोपाइँ भएको छ । पूर्वाञ्चलमा ८१.०२, मध्यमाञ्चलमा ८५.८५, पश्चिमाञ्चलमा ९६.७१, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ९७.२९ र सुदुरपश्चिमाञ्चलमा ९९.८८ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । सबैभन्दा धेरै सूदुरपश्चिमाञ्चलको […]